घनमा कति बोर्डको गणना गर्ने हो?
तपाईंले विभिन्न प्रकारका बोर्डहरूको क्यूब्युट गणना गर्न र प्रश्नको उत्तर गर्नु अघि: "क्युबमा कति बोर्डहरू छन्?" - हामीले "क्यूबिक मीटरको काठ" को अवधारणालाई विचार गर्नुपर्दछ, र निर्माण बजार के हो।
नेत्रको काठ र उनीहरुको आकार
बोर्डहरु को लम्बेडाइनल कोटिंग द्वारा उत्पादित गरिन्छ। तिनीहरूसँग4देखि6मीटरको मानक लम्बाई छ। चौडाइ भिन्न हुन्छ। सबैभन्दा नाजुक व्यक्ति नक्कली वर्गको हो - दुई र अर्ध सेन्टीमिटर सम्म हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ बोर्ड-शेललिका हुन्छ, जसको मोटाई मूलतया दुई सेन्टिमिटर बराबर हुन्छ (तर यो 2.5,4र5सेन्टिमिटर हुन्छ)। अधिक महंगा - निर्माण बोर्ड छंटनी, जसको आयामहरू एकदम मान्य मानिन्छ: चौडाइ सधैँ यसको डबल उचाइ भन्दा ठूलो छ, र लम्बाई4(4.5 भन्दा कम) र6मिटर हुन्छ। थोरै बोर्डहरूलाई बार भनिन्छ। सुविधाको लागि, अनुहारको काठले क्यूब्समा बेचेको छ, र निर्माणको लागि यो 1 क्यूबमा कति बोर्डहरू जान्न महत्त्वपूर्ण छ।
हामी प्यानलिंग को जांच नहीं गर्नेछन्, यस तथ्य को कारण कि यस्तो प्रकार के काठ को मुख्य रूप देखि परिष्करण को काम को लागि प्रयोग गरिन्छ र अलग देखि गणना गरिन्छ।
सबै भन्दा पहिले निर्माण स्थलमा तपाईले बोर्ड-शेललिका आवश्यकता पर्नेछ, जुन किनारा बोर्डको तुलनामा धेरै चोटि सस्ता हुन्छ र यन्त्रकृति, छत, छत, फ्लोरिंग, सहायक परिसरको निर्माणको लागि आवश्यक छ।
यस्तो बोर्डको चौडाइ 10-15 सेन्टिमिटर हुन सक्छ, लम्बाइमा तिनीहरू मानक हो वा दुई वा तीन मीटरमा काटिए। भविष्य को आधार को परिमिति र कास्टिंग को मापदंडों को जानने को लागी, क्यूब मा कितने बोर्ड र किस क्यूबिक मीटर को आपको formwork मा खरीद को आवश्यकता को गणना गर्न आसान छ। अधिक सटीक गणनाका लागि, तपाईं अनलाइन अनलाईन क्यालेन्डरहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुन किन्ने लम्बाइको प्रायः बिक्रेताको साइटमा छन्।
क्यूब्युचरलाई के गरिन्छ?
यदि तपाइँ सिधै प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ: "घनमा कति बोर्डहरू छन्?" - त्यहाँ त्यहाँ एक विकल्प हुनेछ - क्यूबिक मीटर। हामीलाई थप विशिष्ट डेटा चाहिन्छ। उदाहरणको लागि, कुन क्षेत्र एक निश्चित मोटाई को एक घन कोने काठ संग सिलाई सक्छ?
वास्तवमा हामी बोर्डको चौडाइलाई तिरस्कार गर्नेछौं - डब्लु, मोटाई - टी, लम्बाइ - डी। परिणाम मोटाई (टी) मा निर्भर हुनेछ। स्क्वायर सूत्र (पी) स्कूल बेंचबाट जान्छ:
पी (एम2) = डब्ल्यू एक्स डी / टी (1 एम एक्स 1 एम / 0.02 एम = 50 एम2)।
त्यो छ, यदि हामी एक घन मीटर बोर्ड को2सेमी मोटाईन्छ भने, उनि 50 एम2को कवर गर्नेछन्।
कहिलेकाँही तपाईंलाई 1 एम3मा रूखको कुल लम्बाइ (डी) जान्न आवश्यक छ।
हामी सूत्रको अनुसार गणना गर्दछौं:
डी = 1 एम3/ टी एक्स डब्ल्यू।
अन्तमा, प्रश्नको उत्तर: "बोर्डको कति टुक्रा क्यूबामा (बार, गोल खाली, आदि)?"। यदि काठको प्यारामिटरहरू चिनिन्छन् भने, परिणाम सूत्र लागू गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ:
K = डब्ल्यू एक्स टी एक्स डी।
यस सिद्धान्तमा, र एक बोर्डको कभरेज गन्नुहोस्, तर मीटरमा सबै आयामहरू अनुवाद गर्न नबिर्सनुहोस्।
धार बोर्डको भोल्युम गणना गर्ने उदाहरणहरू
सबैभन्दा लोकप्रिय बोर्ड को आधार मा राखिएको छ, जुन दीवारहरु, फर्शहरु, छतहरु, विभाजनहरु, रफ्टरों र सीढ़ियों को निर्माण को लागि प्रयोग गरिन्छ। प्रत्येक आकारको आफ्नै "नाम": एक इन्च, एक फोर्ट, एक पाँच, एक पट्टी (यो तुरून्तै स्पष्ट छ, बोर्डको कुन चौडाई भाषणको बारेमा)।
गणना गर्नुहोस्, उदाहरणको लागि, एक इन्च घनमा कतिवटा प्लेटहरू तपाइँ यसको चौडाइ जान्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, 10 सेन्टीमिटरको चौडाईमा - यो 66 टुक्राहरू र 15 सेमी - 44 टुक्राको चौडाइमा। एक घन मीटर 40 एम2को कवर गर्न पर्याप्त छ।
एक छ-मीटर लामो, 15 सेन्टिमिटर चौडाईको क्यूब्युटको गणना गर्ने एउटा उदाहरण:
0,15 एम क्रो 0,025 एमएच6मीटर = 0,0225 मीटर3।
यदि तपाइँ भोल्युमको गणना गर्न चाहानुहुन्छ, उदाहरणका लागि, फर्शबोर्डहरू (स्पाइजहरूसँग), बोर्डको मात्र कार्यरत चौडाई (स्पेस बिना) सूत्रमा प्रतिस्थापन गरिएको छ। यदि blockhouse गणना गरिएको छ (एक लग अनुकरण गर्ने बोर्ड), त्यसपछि मोटाई उच्चतम बिन्दुमा संकेत गरिएको छ।
डामरको घनत्व। डामर रचना, GOST, ब्रान्डहरू, विशेषताहरू
सिमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप 12he18н10т
अमेरिकन विनाशकारी डोनाल्ड कुक (फोटो)
सेतोटोभका ठूला उद्यमहरू: एक सिंहावलोकन
"बिग बुड 747" दुनियाको सबैभन्दा ठूलो ट्रयाक्टर हो। फोटो र वर्णन
पशु र प्रकृति र कैद आफ्नो जवान
हाइड्रोजन पेरोक्साइड संग Douching: सुनिंनु विरुद्ध घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने
के वस्तु र अध्ययन को विषय निर्धारण
इन्टरनेट मा पैसा कमाउन लोकप्रिय तरिका
अभिनेता व्लादिमीर Borisov जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
दक्षिण कोस्ट आकर्षण। आकर्षण क्रिमीआ को दक्षिणी तट
को Phulin Resort3* (फुकेत, थाईल्याण्ड): समीक्षा र विवरण
घाँटी यसलाई आफ्नो टाउको बारी दुख्छ दुख्छ,: के?